Inghọrọ ụdị nkịta - Nkịta Ajụjụ
Ọ dịghị nkịta ìgwè zuru okè. Udiri anumanu nile nwere nsogbu. (Site: Na-ahụ n'anya )
Ma ị na-eche echiche ịnweta nkịta dị ọcha ma ọ bụ ngwakọta, ị kwesịrị iwepụta oge iji mee nyocha banyere ụdị nkịta.
Ọ bụrụ na ị na-eche echiche banyere mix, ọ ga-eme ka gị ndo search nnọọ mfe ma ọ bụrụ na i nwere n'uche “ihe dị ka ụlọ nyocha” ma ọ bụ “ụfọdụ ụdị Terror.” Will ga-amatakwu banyere ndị nkịta na-agabiga ọchụchọ ahụ. Ma ọ bụrụ na ị chere na ị maraworị ụdị ụdị ịchọrọ, ịnwere ike ile ụfọdụ n'ime ihe ndị a anya - ị nwere ike ịchọpụta na ụdị zuru oke bụ ihe ị na-echetụbeghị mbụ.
Enwere ụdị nkịta karịrị 400 n'ụwa, ọ nweghịkwa otu ụdị kwesịrị maka mmadụ niile.
Ajụjụ ndị ị ga-atụle mgbe ị na-achọ nkịta
Kedu nha kwesịrị gị?
Ajula maka nkịta nkịta 'dị mma' - maka ụfọdụ ndị, nke ahụ pụtara 25 pound; maka ndị ọzọ ọ pụtara 75.
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọpụta igwe dị oke mkpa, ị na-achọ ihe hà ka Cocker spaniel ma ọ bụ nkịta German na-azụ atụrụ?
Ego ole ka ị nwere?
Nke a metụtara ajụjụ ikpeazụ, mana ọ dabereghị na ya - ọ ga-ekwe omume idobe nnukwu nkịta na obere oghere, ma ọ bụrụhaala na ị nwere ike inye ha ọtụtụ ohere maka mmega ahụ n'èzí ụlọ ma ọ bụ ụlọ. Mana buru n’obi na ọ bụrụ na ụlọ gị pere mpe nke ukwuu, Newfoundland nwere ike iweghara ohere ụlọ niile dị.
N'aka nke ọzọ, ụfọdụ ụdị anumanu buru ibu anaghị arụ ọrụ ebe ụmụ nwanne nne ha ga na-agagharị mgbe niile. Newf na-eburu akwa ime ụlọ niile, mana ọ nwere ike ime ebe ahụ karịa karịa, sịnụ, Jack Russell Terrier, obere nkịta na-arụsi ọrụ ike.
Kedu mmega ahụ ị nwere ike inye nkịta a?
Fọdụ nwere ike ịga ije na obere ije; ndị ọzọ kwesịrị ịgba ọsọ ọtụtụ awa kwa ụbọchị. Lelee anya n'eziokwu na ị dị njikere ma nwee ike ime nkịta gị.
Jide n'aka na ị ga-atụle oge gị na ikike egwuregwu gị: Ọ bụrụ na ịchọrọ nkịta na-arụsi ọrụ ike mana usoro ọrụ gị na-eme ka ị rụọ ọrụ 70 awa kwa izu, enweta nkịta na-arụsi ọrụ ike. Ọ ga-amasị ya iso gị na-agba ọsọ na ngwụsị izu ma ọ ga-enwe obi ọjọọ (ma eleghị anya na-ebibi) n'oge izu ọrụ mgbe ị na-enweghị oge iji megharịa ya.
Ebee ka nkịta ga-ebi?
Ọtụtụ ndị mmadụ kwenyesiri ike na nkịta niile kwesịrị ibi n'ụlọ ahụ, ihe ọbụla nkịta ọ bụla ga-eme nke ọma n'ime ya ma ọ bụrụ na enye ya mmega ahụ zuru oke. Ọ bụrụ na nkịta gị ga-anọ ọtụtụ oge n'èzí, ị ga-atụle ọnọdụ ihu igwe gị n'ịhọrọ otu ụdị - ụfọdụ enweghị ike ịnagide okpomọkụ, ebe ndị ọzọ enweghị ike ịpụ na oyi.
Ọ bụrụ na nkịta gị ga-ebi n’èzí, gbaa mbọ hụ na ha nwere ụlọ zuru oke (nke emechiri emechi, kpuchie, ma eleghị anya ọbụlagodi ọkụ), ma gbalịsie ike ka gị na ha nọrọ. Echekwala na nnukwu nkịta ugwu Bernese ga-ebi n'èzí na anwụ anwụ n'oge ọkọchị.
Ego ole ka ị dị njikere ime?
Dị njikere itinye oge achọrọ ka ịchebe uwe ogologo dị nro na-enweghị ụdọ na akwa? Kedu maka ego iji nweta nkịta na-arụ ọrụ nke ọma ma na-egbutu ya mgbe niile - sịnụ, kwa izu isii maka ụdị anụ ọhịa ndị na-adịghị awụfu Sheepadoodle ?
Ọbụna nkịta ndị na-adịghị edozi ahụ nke ọma nwere ike ịgafe oge na-ada nnukwu uru mgbe uwe ha chọrọ nlebara anya. Nkịta niile, ọbụlagodi ndị na-enweghị ntutu isi, kwesịrị ka a lekọta mbọ, anya, na ntị ha.
Kedu ihe ị ga-eme nkịta gị?
Chọrọ ndozi ndina na-eguzosi ike n'ihe? Onye so jogging? Ezigbo ndị nche? Ma ọ bụ ịchọrọ ịmalite ịgagharị ọtụtụ ọrụ ị nwere ike ime nkịta gị - ihe dịka nrube isi, ịdị gara gara, njem njem, ịzụ anụ, ịchụ nta, ma ọ bụ nke ọ bụla n'ime ọtụtụ ndị ọzọ nọ ebe ahụ?
Nke a ga-emetụta oke nhọrọ gị n'ihi na, dịka ọmụmaatụ, ọtụtụ ụdị egwuregwu ụmụaka anaghị eme ezigbo nkịta Frisbee.
Kedu ihe gara aga ị nwere nkịta?
Ajuju a ekwesighi ka eweputa nkita ma oburu na i nwebeghi ya - onye obula nwere nkita mbu n’oge ufodu. Mana enwere udiri anumanu ndi akwadoghi maka ndi na enye umu anumanu oge mbu.
Ọ bụrụ na ị nweela nkịta na mbụ, chee echiche banyere ihe masịrị gị banyere ha - ọ nwere ike ịba uru, n'ihi na ọ nweghị onye ga-atụ aro oke ala gafere onye hụrụ ihu ọchị oge niile n'anya nke mama na papa basset hound.
Ọ bụrụ na ị nwere ụmụ, ị dịla njikere ikuziri ma ụmụaka ma nkịta ka ha biri n'udo?
Childrenmụaka na nkịta nwere ike ịme ọmarịcha ngwakọta… ma ọ bụ nke jọgburu onwe ya. Kwesịrị iwepụta oge iji zụọ ma nkịta ahụ na ụmụ na-emeso ibe ha ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị.
A nkịtị ajụjụ bụ “Olee ụdị anumanu dị mma na ụmụaka?” Azịza ya bụ na ọ dabere karịa etu esi azụlite nkịta ma zụọ ya. Nlekọta - ọbụlagodi maka nkịta dị mma na ụmụaka - kwesịrị. Naanị n'ihi na nkịta dị mma na ụmụaka enweghị ikike maka ụmụaka ịkatọ nkịta ahụ. Nkịta ọ bụla ga-enwe oge ha na-emebi.
Ọ bụrụ na ị maghị na ị nwere ike ịzụ ụmụ nkịta na / ma ọ bụ ụmụaka na nke a n'ụzọ ziri ezi, ịnwere ike ịtụle ichere ruo mgbe ụmụaka tolitere, ma ọ bụ chọta nkịta toro eto mara na ọ dị mma na ụmụaka wee lekọta.
Kedu 'ọrụ' ị na-achọ ka nkịta gị mara?
Ọ bụrụ n’inwere ụdị anụ dị ole na ole n’uche, echefula iche maka ọrụ a zụrụ ha. Ọ bụ naanị ụdị anụ ọhịa ndị e mepụtara ka ọ bụrụ anụ ụlọ. Imirikiti nkịta ka a na-azụkarị ịbụ ndị dinta, ndị na-azụ anụ ụlọ, ndị nche, ma ọ bụ ọrụ ọ bụla ọzọ nwere ike ịdị njọ na ihe ị tụrụ anya na anụ ụlọ.
Ọ bụrụ na ubi gị dị gị oke mkpa, ị nwere ike ọ gaghị achọ ị nweta ọdụ ụgbọ mmiri; ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ha niile ga-egwu ala. Ọ bụrụ na ịnweghị oge iji mee nkịta, enwetala dalmatian, ụdị pointer ọ bụla ma ọ bụ nlọghachi, ma ọ bụ ọtụtụ ụdị ịzụ anụ - a na-azụ nkịta a niile ịga ọtụtụ kilomita na-enweghị ike ọgwụgwụ. Ma ọbụlagodi na enweghị ndị nkuzi ị ga-eche nche, enweghị nnụnụ ịchọta, yana atụrụ atụrụ ikuru, ha ka na-achọ mmega ahụ ma ha ga-achọta ụzọ iji mee ka ị mara ma ha anaghị ezu.
(My abụọ na-azụ ìgwè na-atọ m ụtọ nke ukwuu n’olu dara ụda Egwuregwu mgba abalị na ụbọchị ọ bụla mgbe ha anaghị emega ahụ otu awa ma ọ bụ abụọ. Amụtawo m ijide n'aka na ha ga-enweta mmega ahụ kama.)
Ọzọ, na Nkebi nke 2, anyị nyochara ihe ị kwesịrị ịme ozugbo ịchọtara ụdị gị ma ọ bụ ngwakọta.
Part 2: Mgbe Findchọta gị Nkịta » Ibe akwukwo:1 2 Igodo njem
Dodị Nkịta Japanese: isii Nkịta Ochie & Na-adịghị Ahụkebe
Ihe I Kwesiri Mara Banyere Australian Labradoodle
Ozi Nzuzo nke Vizsla Dog & FAQs
Ihe niile I Kwesịrị Knowmara banyere Onye Ọzụzụ Atụrụ dị ebube nke Shaịlo
Nduzi gị zuru ezu nye Deer Head Chihuahua
Is‌ ‌an‌ ustAustralian‌ heSepherd‌ usHusky‌ ‌mix‌ ‌the‌ ‌right‌ ‌dog‌ maka ‌you? ‌
Chinese Shar-Pei Dog ụdị FAQs na Ozi
Soft Coated Wheaten Terrier: Ntuziaka nye 'nkịta onye ogbenye'
Pomeranian Husky: Nchịkọta Dog zuru ezu na ntuziaka
Husky Lab Mix Breed Information: Ahịa, Puppies & Ọdịdị
waya ntutu dachshund maka ọrịre
aha ojii na ọcha husky
Ọnụ ego nke Obere onye ọzụzụ atụrụ Australia
aha nwoke maka pitbull puppies
aha nwoke maka obere nkịta